တစ်ကြိတ်စက် Coaster ၏ပုံစံအတွက်ကိတ်မုန့်၏အဘိတ် - လုံလောက်တဲ့ရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါတယ်နှင့်မျှမကအထူးကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။ ထုတ်ကုန်များနိမ့်ဆုံးထား၏ရိုးရှင်းစာရွက်သေဒဏ်စီရင်တဲ့စိတ်ကူးအရသာရလဒ်သည်။
သန့်စင်ပေးရမည်မုန့်ညက်, ဂျုံ - 480 ဂရမ်;
ကြက်သားရွေးချယ်မှုကြက်ဥ -4PCs ။
သဲသကြား - 380 ဂရမ်;
မုန့် -2ကီလိုဂရမ်;
ပြိုကွဲသို့မဟုတ်ဆပ်ရှာလကာရည်မှာ Soda - 10 ဂရမ်,
vanilla - အဖြစ်တော့;
ကိုကိုးအမှုန့် - 120 ဂရမ်;
အစပိုင်းမှာမုန့်စိမ်းတစ်ပန်းကန်လုံးထဲသို့ကြက်ဥကိုချိုးဖျက်သကြားတစ်ဖန် add နှင့် fluffy သည်အထိပါဝင်ပစ္စည်းများ whisk ။
, အိုးတွင်ထည့်ရန်အချဉ်မုန့်နှစ်ခွက်နှင့်နောက်တစ်ကြိမ်အနည်းငယ် whisk ။
အချဉ်ကိုကိုးအမှုန့်နှင့်အတူကြက်ဥအရောအနှောသို့လောင်းသန့်စင်ပေးရမည်မုန့်ညက်, vanilla နှင့်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်င့်ကျက်မှုပြိုကွဲရှာလကာရည်မှာ Soda မိတ်ဆက်ပေး။
နူးညံ့သောအထိ preheated 185 ဒီဂရီမီးဖိုအတွက်ကိတ်မုန့်ဖုတ်နှင့်လုံးဝအအေးပေး။
ဤအတောအတွင်းကျန်တဲ့ကာလကိုမုန့်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်း, vanilla တစ်ဦးဖြစ်တော့ကျန်ရှိသကြားလောင်းနှင့်နေဆဲအချိန်အတန်ကြာ whisk, fluffy သည်အထိကောင်းစွာမျြးစိမျ့စိမျ့ရောနှောဖြစ်ပါတယ်ရိုက်တယ်။
အခုတော့နှစ်ခုစင်တီမီတာမှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထက်ဝက်တစ်ဘက်နှင့်အတူအကြမ်းဖျင်းညီမျှအရွယ်အစား Cube သို့ကိတ်မုန့်ဖြတ်အားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်ဝေမျှချဉ်မုန့်သို့ကျဆင်းလာ၌ထားတော်မူ၏နှင့်လင်ပန်းပေါ်အမှိုက်ပုံအိပ်လေ၏။
ကိတ်မုန့် "နှင်းတောင်တန်း" သာမယ့်အစားစေတနာစိတ်အုန်းသီးနှင့်အတူဖြန်းချောကလက်ချစ်ပ်များ၏အလှဆင်ဘို့, တူညီတဲ့ထုံးစံ၌ပွငျဆငျဖြစ်ပါတယ်။
ချယ်ရီသီးနှင့်အချဉ်မုန့်နှင့်အတူမူရင်းနှင့်အရသာကိတ်မုန့်လျော့နည်းနှင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ "ဟေးလ်" ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အချဉ်မုန့်နှင့်အတူရေမြှုပ်ကိတ်မုန့်ချပ်သီးချယ်ရီသီးနှင့်အတူ alternated ရမည်ဖြစ်သည်, ချွတ်ချွတ်နှင့် အချဉ်မုန့် ကပိုသကြား၏ထက်ဝက်ခွက်မှထည့်ပါ။
ကိတ်မုန့်နို့ဆီနှင့်အတူ "Gorka" - စာရွက်
သန့်စင်ပေးရမည်ဂျုံမုန့်ညက် - 510 ဂရမ်;
ရှေးခယျြမှုကြက်သားကြက်ဥ - 1 pc; ။
သဲသကြား - 160 ဂရမ်;
ထောပတ်သို့မဟုတ်မာဂျ - ½စံဗူး;
မုန့် - 95 ဂရမ်,
ပြုတ်နို့ဆီ - 570 ဂရမ်;
seedless စပျစ်သီးပျဉ် - 90 ဂရမ်,
ကုန်တယ်အခွံမာသီး - လက်တဆုပ်စာ။
အရည်ကျိုထောပတ်သို့မဟုတ်မာဂျများနှင့်အချဉ်မုန့်နှင့်အသန့်စင်ပေးရမည်မုန့်ညက်, သကြားနှင့်အတူအနည်းငယ်ရိုက်နှက်ကြက်ဥနှင့်အတူတစ်ပန်းကန်ထဲမှာရောထွေး, မုန့်ဖုတ်အမှုန့်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းသို့မဟုတ်ရငျ့ကကျြဆိုဒါမှာ။
, အသေးစားဘောလုံးခွဲခြားသောအလုံအလောက်ခိုင်မာသောမုန့်စိမ်း, Get အကြောင်းကိုလေးဆယ်မိနစ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလပ်စတစ်ဘုတ်အဖွဲ့ရပျရပျအပျေါထားတော်မူ၏။
စမ်းသပ်မှုအချိန်ပြီးနောက်ကြီးမားသော grater ချစ်ပ်မှတဆင့်ပုတီး triturated ခံခဲ့ရကာမုန့်ဖုတ်စာရွက်ပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
ရလဒ်အစအနအတူနို့ဆီရောထွေး, Pre-ပေါင်းစပျစ်သီးပျဉ်နှင့်အခွံမာသီးများနှင့်တစ်ဦးဆလိုက်ပန်းကန်ပေါ်တွင်တင်, စိုစွတ်သောကိုယ်လက်နှင့်လိုချင်သောပုံသဏ္ဍာန်ပေးခြင်းအချိုပွဲ။
Custard ကိတ်မုန့် - စာရွက်
Shortbread - စာရွက်
Raffaello - အိမ်မှာအံ့သြဖွယ်အချိုပွဲချက်ပြုတ်နည်းများ
အိမ်မှာ Nutella Make မှဘယ်လိုနေသလဲ?
Minced အသားနှင့်အတူဖုတ် Zucchini
အဆိုပါပွဲဦးထွက်မော်ဒယ် Iris က Lo မှကြိုဆိုပါ၏!
အဆိုပါဒစ္စနေး Princess ကိုမှန်ကန်ဆံပင်ဖြစ်လျှင် ...
ပရိုတိန်းမုန့်ကိတ်မုန့် - topping များအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
Kimchi - စာရွက်
Seabuckthorn - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ